Ibhatyi yedenim, izikhonkwane kunye nokuvunywa kweWWDC | Ndisuka mac
Ibhatyi yedenim, izikhonkwane kunye nokuvunywa kweWWDC
Ezi zizipho ezinikwa yiApple abanini-thamsanqa betikiti le-WWDC kulo nyaka ka-2017. I-Apple, njengonyaka, ibeke amatikiti eraffle ukuze ikwazi ukuzimasa umsitho apho isoftware ihlala ingumntu ophambili, amatikiti athengisiwe aphuma kumzuzu wokuqala nangaphezulu kulo nyaka izakuba yinto yokuqala esemthethweni yenkampani yaseCupertino kwi2017. Abazimiseleyo ukuba nenethamsanqa baqokelela iziqinisekiso zokufikelela kwiziko lendibano laseMcEnery kwiiyure ezimbalwa apho unikezelo lweendaba izakwenzelwa i-iOS, iiMOSOS kunye neTVOS, kodwa ukongeza kwimvume Abazimaseyo banxibe idyasi yebhola yedenim eyenziwe ngokonobumba beWWDC kulo msitho nezikhonkwane.
Iinethiwekhi zentlalo zizalisa ii-tweets apho ungabona khona izipho ezinikwa yiApple kwabo bazimasayo emva kokuhlawula iidola ezili-1.000 XNUMX esele zenziwe ngabo bonke abo baphuhlisi abanethamsanqa abafumene ukungena. Nazi ezinye ii-tweets:
Ibhatyi entle nezikhonkwane kulo nyaka. #ydc pic.twitter.com/zbO5SMoqLp
-Hideya Aita (@ q2hide) 4 Juni ka 2017
Izikhonkwane ze-Enamel, iibhatyi zeelori zesiko likaLevi (kubungakanani babafazi !!). Ukuhamba kweBhaller, iApple. # WWDC17 pic.twitter.com/aMbDyoNSus
- Jessie Char (@jessiechar) 4 Juni ka 2017
Ibheji ine-chip ngaphakathi, ibhatyi kaLevi, iflegi yelizwe eliqhelekileyo kumntu ngamnye oza kubakho kunye nezikhonkwane! pic.twitter.com/CfeXtu3Bpd
-Patrick @ WWDC (@BalestraPatrick) 4 Juni ka 2017
Ngamafutshane, imemori elungileyo kakhulu kwabo bazayo kule WWDC kwaye siqinisekile ukuba abanye babo baya kuyisebenzisa ukufumana imali kwi-eBay okanye efanayo. Le bhatyi kaLevi kunye nezikhonkwane apho ungabona khona ezinye zoyilo ezintle kubandakanya iphini lelizwe lomntu oqokelela ukuqinisekiswa, usibonisa abanye abanjengeentaka zikaSwift, enye inentsomi "Molo" weMac, amakhonkco eApple Bukela, iapile enemibala, njl. ilungiselelwe kuphela abozimase inkomfa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ibhatyi yedenim, izikhonkwane kunye nokuvunywa kweWWDC
IBozoma Saint John inokushiya iApple kungekudala